ဦးခင်မောင်လတ် • Open Myanmar Initiative
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် ၁၁/စတန (နိုင်) ၀၁၃၈၇၇
ယခင်အလုပ်အကိုင် ဂျာနယ်လစ်၊ သတင်းဘာသာပြန်
ရွေးကောက်ခံရသည့် လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရွေးကောက်ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)
လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် စတင် ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက် ၀၁-၃၁-၂၀၁၁
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုးများကို ရွေးချယ်ပြီး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများကို တားဆီးရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင်နေသည်ကို သိရှိလိုခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ကူတောင်ချောင်း ဖျားကို ပိတ်ဆည်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်လူ၊ ကျွဲ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များအတွက် ရေပေးဝေပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
စစ်တွေရထားလမ်းပိုင်းနှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းရထားလမ်းပိုင်းရှိ ဆွေးမြေ့နေသော သစ်သား ဇလီဖားတုံးများကို အစားထိုးပြီး အဆိုပါလမ်းပိုင်း(၂)ခုကို တံတားထိုးဆက်သွယ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နှင့် စက်မှုဇုန်ရှိရာ ဦးရာဇ်တောင်ဘက်ကမ်းကို ဆက်သွယ်ပေးမည့် ကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် ငါးသယံဇာတ ပေါများမှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှု အခြေအနေနှင့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်း ရေယာဉ် များဖြင့် ငါးဖမ်းခွင့်ကို နှစ်အကန့်အသတ်ဖြင့် လုံးဝပိတ်ပင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
မာဘဲလ်ကျောက် ထုတ်ယူမှုကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးနိုင်မည့် အလားအလာ အတိုင်းအတာကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် တောင်ကုတ်မြို့၌ မာဘဲလ်ကျောက်ပြား ကုန်ချောထုတ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကြိမ်ချောင်းနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ သရက်ချောင်းတို့၌ အသေးစား သို့မဟုတ် အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမြို့များ၏ မြို့စွန်ရှိ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ၏ လူနေဧရိယာ တဖြည်းဖြည်း ကြီးကျယ်ပြန့်ကားမှုသည် မြို့ပြ အက်ဥပဒေနှင့် ကျေးရွာအက်ဥပဒေများ နှင့်အညီ တရားဝင်ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာများ ဟုတ်/မဟုတ်၊ ဥပဒေနှင့် မညီပါက နောင်တွင် ယင်းတို့၏ လူနေအိမ်ရာနယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး ထိန်းချုပ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ရသေ့တောင်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသေးစား သို့မဟုတ် အလတ်စား ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၊ CMP စက်ရုံများနှင့် SMEs လုပ်ငန်းများ တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
အနာဂတ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကမ်းခြေနှင့် မြစ်ကြောင်းများ လုံခြုံရေးအတွက် မြန်နှုန်းမြင့်သင်္ဘောဘုတ်များ ပါဝင်သော ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်စေ၊ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
၀၆-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၀၇-၁၀-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၁၁-၁၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၁၁-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၀၁-၂၉-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၁၁-၂၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၀၁-၂၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
၀၈-၀၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးချက်
OMI Myanmar © 2014. All Right Reserved. Developed by Myanmar Links. Powered by RebornCMS.
အချက်အလက်များအား ထည့်သွင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါ၍ အမှားအယွင်းများတွေ့ရှိပါက research@omimyanmar.org သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက cto@omimyanmar.org သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။